Xiddig ka tirsan Manchester United oo laga baaray coronavirus kaddib labo toddobaad oo uu karaantiil ku jiray – Gool FM
Xiddig ka tirsan Manchester United oo laga baaray coronavirus kaddib labo toddobaad oo uu karaantiil ku jiray
(Manchester) 26 Abril 2020. Xanuunka coronavirus ayaa wali si kala joogsi la’aan ah ugu fidaya dunida dacalladeeda, waxaana uu saameeyay nooc walba oo ka mid ah dadka.
Goolahayaha kooxda Manchester United ee Sergio Romero ayaa laga baaray xanuunka coronavirus kaddib markii uu labo toddobaad ku karaantiilnaay gurigiisa dalka Argentina ku yaala.
Natiijadii baarista ayaa caddeysay in Romero uusan qabin xanuunka coronavirus balse uu si adag ugu safray caasimadda dalka Argentina ee Buenos Aires, isagoo 14 saacadood safar ku qaatay la dul fadhiyay kursi xilli ay jirto cabsi ku aaddan faafaha coronavirus.
33-jirkan ayaa lagu qasbay inuu gaar u noollaado isagoo isku xiray hotel ka hor inta aanan baaritaanka lagu sameyn, waxaana gurigiisa loo fasaxay saddex maalmood kaddib markii la baaray si uu qoyskiisa ula midoobo.
Klopp oo taleefoonka ka wacay aabbaha dhalay Kylian Mbappe... (Muxuu kala hadlay?)
David Silva oo ammaan weyn ka helay xiddig ka tirsan kooxda Manchester City